Itoobiya: Saraakiil sare oo ka tirsan Gobolka Oromia oo xabsiga la dhigay – Kasmo Newspaper
Itoobiya: Saraakiil sare oo ka tirsan Gobolka Oromia oo xabsiga la dhigay
Updated - March 16, 2018 2:36 pm GMT
London (Kasmo), Warbaahinta maxalliga ah ee Itoobiya ayaa qoraysa in Taliska ‘Command Post’ ee loo xilsaaray ilaalinta xukunka degdegga ah xireen Sarkaal sare oo ka tirsan Gobolka Oromia.
Taye Dendea oo ah Qareen iyo madaxa is-gaarsiinta Xafiiska Caddaaladda Oromia waxaa loo xiray waraysi uu maalintii Talaadada siiyay laanta afka Amxaariga ee VOA, taas oo uu ku beeniyay warbixintii Xukuumaddu ka soo saartay dhacdadii Mooyaale ee 10kii March 2018.
Taye ayaa shilkaas oo lagu laayay 10ka qofood ee rayidka ah ku tilmaamay mid si ulakac ah loo fuliyay, laakiin warbixinta rasmiga ah ee Xukuumaddu waxay ahayd in ciidanku isticmaaleen macluumaad khaldan oo sirdoonku u soo gudbiyeen.
Wararka ayaa sheegaya in ay tahay markii 3aad ee la xirayo sarkaalkaan oo horey ay ugu soo dheceen xukunno 3 iyo 7 sano oo xabsi ah, intii u dhexeysay 2003-2016, markaas oo lagu eedeeyay in uu ka tirsanyahay Jabhadda OLF ee Orommada.
Warar kale ayaa sheegaya in ku-xigeenkii Taliyaha Boliiska, Madxii Maamulka Bariga Hararghe iyo Duqii magaalada Nekmet, dhammaantood xiranyihiin, sida Seyoum Teshome oo ah qoraa (Blogger) xukunka degdegga ah ku dhaliilay qoraalladiisa.
Dhacdadaas Mooyaale waxay xadka Kenya ka dhalisay xaalad aadami oo baahsan iyada oo in ka badan 8,000 oo qofood oo haween iyo carruur u badan u qaxeen Kenya, halka idaacadda Xukuumadda, EBC xaqiisisay in ay jiraan 39,000 oo barakacyaal ah.